Xildhibaan Jeesow oo sheegay in Xukuumadda ku guul dareysatay sugidda amniga Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muddo ka badan 50 maalin ay ka socdaan baaritaano xoog leh.
Xildhibaanka ayaa sheegay in 50 maalin kadib wali ay Muqdisho sidedii tahay oo aysan jirin guulo la taaban karo oo ay gaareyn hey’adaha amaanka Soomaaliya balse ay dadaaleen mudadaasi 50 maalin ah.
“Iima muuqato guulo la gaaray maalmaha baaritaanka socday, wali waa dhacayaan qaraxyada iyo dilalka” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. “Xalay ayaa ugu dambeysay magaalada 2 qarax ayaa ka dhacday mana jirto wax laga qabtay amaanka” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in Shacabka lagu cadaadiyay magaalada Muqdisho islamarkaana laga xirtay taasna ay tahay mas’uuliyad darro ay muujisay Xukuumadda Soomaaliya isagoo dalbaday in isbadal amni la timaado Xukuumadda.
“Xukuumadda waxaan ka rabnaa isbadal amni iyo in la furo wadooyinka waayo aniga amni la sugay uma jeedi laakiin waxaan arkaa dad la dhibay oo wadooyinka laga xirtay” ayuu u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan qirayaa in ay dadaaleen Ciidamada amaanka balse waxaa jirta istiraatiijyad xumo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Daahir Amiin Jeesow.
Inkastoo Ciidamada amaanka Soomaaliya ay xireen wadooyinka Muqdisho dadaalna ay wadaan hadane wali magaalada Muqdisho waxaa ka jira qaraxyo iyo dilal ay fulinayaan dagaalamayaasha Al-shabaab. Qaraxii ugu dambeeyay ayaa xalay ka dhacay meel u dhaw Madaxtooyada Soomaaliya.
Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo kulan la qaatay qaar kamid ah dhalinyarada uu matalo